Ma Hub ka dhigis baa Muqdisho ka socta Mise Hub ka dhicis? – Hornafrik Media Network
MADASHA HORNAFRIKMAQAALOTOOSHKA HORNAFRIK
Waxaa jira dad badan oo dhalinyaro iyo odoyaal isugu jira oo hubka u qaatay dakano ay u galeen dowlada darteed tusaale sida in xil loo dhiibay ayagoo waajib qaran gudanayana ku dakanoobay xilkiina laga qaaday hubkana ku ilaaliya naftooda hadana hadii hubka laga qaado taasi soo ma aha in Shabaab iyo cadowga kaleba dadka loo gacma qabanayo.
Waxaa jira qorshooyin badan oo la marsiiyo hub ka dhigista sida in bilooyin badan Sadax bil ilaa iyo Lix bil in loo qabto dadka hubeysan in ay kusoo wareejiyaan gacanta dowlada lana sameeyo wacyi gelin dhinaca warbaahinta ah loona sheego in hubka ay heestaan loo sharciyeenayo ama lacagta loo celinayo ileen marki horeba dowlad uma eysan gadine.
Balse dowlada ayaa waxa ay wadaa sida aan madaxda afkooda ka maqlay qorshe lagu ilaalinayo dhamaan dadka u baqanayo naftooda ilaa iyo xad waxaana rajeyn doonaa arintaas in lagu daro arin dhaqaale celin ah taasina waxa ay fududeen doontaa in dad badan aysan hubka duugan oo ay Dowlada kusoo wareejiyaan Su’aasha taaganna waxa ay tahay dowlada maku filantahay tahay in askari walba ay gurigiisa ku ilaaliso ama qof walba ay hubka ka qaaday ay ilaaliso?
Marka laga hadlo xaqiiqda jirta ayaa ah in Madaxweynaha, R/wasaraaha, Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo inta badan Saraakiisha ciidamada ay heystaan baasabooro ajinabi waxa ayna ku tashanayaan si walba ay dakane u galaan ayagoo qaranka u shaqeynayo in aysan hub u baahnen hadii xilka laga qaado ileen waxa ay kasoo duulayaan halkii ay dhibaatadu ka jirtay waxa ayna ku nasanayaan guryahooda.
Balse kuwa aan heesan baasabooro shisheeye ee dalka usoo dhibtooday lana dagaalamay shabaab aanan awoodin in ay ku hooydaan guryahooda ayay heesataa walwalka iyo walaaca Dowladaduna waa waajib saaran ka fikirka dadkaas ileen halka ay hada dowladnimada joogto waa dadka soo gaarsiyay qaarkood.
Balse markii loo hadlo dhinaca kale Hal qof oo hubeysan oo qabiilkaaga ah oo kaliya difaacanaya naftiisa, Tan waalidkiisa, iyo tan caruutiisa inta aad ku taageeri laheyd in Dowlada aysan Hubkiisa ka qaadin soo kaagama wanaagsana in aad Dowlada ku taageerto in ay hubka isaga ka qaado ayna kuu badbaadiso Kumanaan qabiilkaaga ah oo gardaro ama qarax lagu dili lahaa.
Badbaadada Shacabka waxaa masuul ka ah Dowlada qabiilka waxa uu dib kuugu celinayaa Mugdigii iyo cidladii muqdisho ay horey usoo martay Hub ka dhigista dowlada maaha hub ka dhicis ee waa badbaadinta qofnimadaada qoyskaaga, qarankaaga iyo qabiilkaaga.
Ugaas-yada Beelaha ku dagaalamaya G/Hiiraan oo isku qilaafay dagaalka Maxaas.